Muxuu yahay hubka Uu Ruushku ku tijaabiyay cirifka dunida? - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaMuxuu yahay hubka Uu Ruushku ku tijaabiyay cirifka dunida?
Muxuu yahay hubka Uu Ruushku ku tijaabiyay cirifka dunida?
Hay’adda qaran ee Ruushka u qaabilsan nukliyeerka, Rosatom, waxay sheegtay in khubarada ay tijaabinayeen matoor laga sameeyay nukliyeer. Balse ma aysan bixin faafaahin dheeraad oo la xiriirta dhanka farsamada.
Ruushka wuxuu horey u tijaabiyay gujis ku shaqeeya tamarta nukliyeerka oo loo yaqaano “Burevestnik”.
Seddax injineero kale ayaa qaraxa ku dhaawacmay, waxaana hadda lagu daweynayaa cisbitaal, sida ay sheegtay hay’adda Rosatom.
“Waxaa jiro xawaare iyo xajmi is ka soo horjeeda, iyo halista gantaal leh shucaac xawaare sare ku socda oo daalikara meel kaste ee uu gaaro,” ayuu u shegay BBC.
“Hannaankan cusub wuxuu asal ahaan ka yimid xilligii midowgii Soviet. Birihii daxaleystay ayaa la soo qaatay dib ayaana loo maalgeliyay.”
Sida uu sheegay Putin gantaalka meesha uu gaarayo “ma xadidna”. Balse qaraxa wuxuu noqon karaa hub kale oo awood u leh qaadidda madaxyada nukliyeerka:
Madfac rido dheer oo maraakiibta lagu rido oo loogu yeero Zircon – Wuxuu siddeed jibbaar xawaarihiisu ka dheereeyaa guuxa, sida militariga Ruushka laga soo xigtay.
Diyaarad duuliya la’aan ah oo meeelo fog oo biyaha badda hoostooda ah gaari karta oo lagu magacaabay Poseidon
Shanta injineer ee dhimatay waa khubaro “hoggaan ah” iyo “geesiyaal” kuwaas oo ka warhayay halista. Waxay horey u sameeyeen tijaabooyiin “si xad dhaaf halis u ahaa”, sida uu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan Rosatom oo lagu magacaabo Valentin Kostyukov.
Wuxuu madax ka yahay xarunta nukliyeerka ee Sarov – meel sir aheyd xilligii dagaalkii qaboobaa halkaas oo laga maamulayay hubka ka sameysan hydrogen ee Ruushka.
Ka dib, Rosatom ayaa sheegtay in tijaabadu ay ahayd “isha ganidda shucaacyo isu dhigma” oo laga fuliyay meel gudaha badda ah.
Mark Galeotti oo ka tirsan machadka Rusi ayaa yiri: “Waxaa jiro shaki badan oo ah haddii Burevestnik uu mar uun arki doono iftiinka maalinta”.
Wuxuu qiray in gantaal kale oo Ruushka muhiim u ah, Bulava, “uu soo maray tijaabo sanado badan ah oo fashilantay”.
Balse Poseidon, si la mid ah Burevestnik, wuxuu u muuqdaa in uu yahay “burburiye wayn”, Mr Galeotti ayaa sidaa sheegay. Waa arrin aan macquul ahayn, wax kastoo yar oo la xiriira dagaalka nukliyeerka.
Wargeyska dowladda Ruushka Rossiiskaya Gazeta ayaa bishii la soo dhaafay qoray warbixin uu madfaca ugu tilmaamay “hubka aargudashada”. Taasi waa oraahda ay Nazi-ga ugu yeeri jireen hubkii ay UK ku garaaceen Dagaalkii Labaad ee Dunida.
Wargeyska waxaa lagu qoray: “Burevestnik wuxuu awoodaa duullimaad dheer, wuxuuna ka baxsan karaa qalabka difaaca hawada. Waxaa lagu garaaci karaa horumar kastoo muhiim ah, ka dib gantaalkii Ruushka ee caagga ahaa ee qaaradaha isaga gudba ee horey u gaaray dhulka cadowga.”
Baadhitaankii la xiriiray “aragti ku toogo 50 Cent” oo la joojiyay